2ffaa-Isaaf ajajamuu fi Isa qofa gabbaruudha. Garuu ibaadan dhugaa ta’uu hin danda’u iimaana sirrii irraa kan burqee yoo ta’e malee. Kana jechuun ibaadan namaa sirrii ta’uuf amantiin (iimaanni) qalbii keessa yoo jiraatedha. Kanaafu, karaan haqa Rabbii bakkaan itti gahan iimaana irraa jalqaba. Ergasii gara ibaadaatti taran. Ibaada yommuu jennu hojiwwan gagaarii Rabbiin jaallatu kanneen akka salaataa, zakaa, sooma, hajjii fi kkf dha.